Maxaa laga filan karaa shirweynaha dhuxusha ee Muqdisho ka furmay? – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Shirweyne caalami ah oo looga hadlayo dhuxusha ayaa ka furmay magaalada Muqdisho, wuxuuna shirkani soconayaa muddo labo maalmood ah.
Waxaa shirka qabanqaabadiisa leh hay’adaha Qaramada Midoobay ee UNDP iyo FAO , halka ay hormuud ka tahay dowladda Soomaaliya, waxaana ka qeybgalaya xeeldheerayaal xagga deegaanka ah.
Shirka ayaa waxaa diirada lagu saarayaa sidii loo heli lahaa badiil ka habboon dhuxusha oo ay dadka wax ku karsadaan si loo dhimo amaba loo joojiyo guud ahaan jarista dhirta.
Waxaa la sheegay in 30 ilmiriqsi oo kasta geed la jaro Soomaaliya si dhuxul looga dubo, dhuxushaas oo inta badan loo dhoofiyo dalalka Carabta, halkaas oo aad looga jecelyahay dhuxusha Soomaaliya laga dhoofiyo.
Ra’isulwasaare ku xigeenka Soomaaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo furitaankii shirka ka hadlay ayaa yiri “Waxaan u baahanahay in aan u wajahno si dhab ah arrimaha dhuxusha Soomaaliya, dalabka iyo daabulka waa in wax laga qabtaa labadaba, si ay taas u suurtogasho waxaan u baahanahay iskaashi in la fuliyo qaraaradii Golaha Amaanka , lana hubiyo in laga hortago qasaaraha deegaanka , dhaqaalaha iyo dadkaba gaaraya”.
Waxa uu intaas ku daray in xaalufka uu horseeday abaaro, daadad iyo in dad iyo duunyaba ay ku naf waayeen saameynta ka dhalatay.
Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa dhoofka dhuxusha mamnuucay sanadkii 2012-kii kadib markii sida la sheegay ganacsiga dhuxusha uu noqday mid dhaqaale badan ay ka sameeyaan ururka Alshabaab.
Warbixino isdabo-joog ah oo sanadihii lasoo dhaafay uu soo saarayay guddiga kormeerka cunaqabataynta hubka Soomaaliya iyo Eritrea ayaa waxaa lagu sheegay in dhuxusha laga dhoofiyo dekada koonfurta Soomaaliya ku yaala, oo ay ka mid tahay Kismaayo, halkaas oo ay ku suganyihiin ciidamada AMISOM iyo kuwa dowlad goboleedka Jubbaland.
Warbixinta kooxda kormeerka waxaa lagu sheegay in Alshabaab ay dhuxusha ku canshuurto dhulka miyiga ah ee laga soo jaro, halkaas oo ay ka taliyaan.
Juliette Biao Koudenoukpo, oo ka tirsan Qaramada Midoobay, una qaabilsan arrimaha deegaanka oo shirka ka hadashay ayaa sheegtay in dhuxusha lagu joojin karo marka uu dhoco iskaashi gobolka geeska Afrika oo dhan.
Sida ay BBC-da u sheegeen dadka deegaanka gobolo ka mid ah Soomaaliya , sidoo kalena ay xaqiijiyeen illo wareedyo madax banaan, waxaa dhacay xaaluf aad u balaaran, iyada oo deegaanada qaar ay u ekaadeen sidii dhul lama degaan ah oo aanan lahayn wax dhir ah oo ay ishu qabanayso.
Sida ay sheegtay Qaramada Midoobay, 8.2 milyan oo geed ayaa la jaray Soomaaliya intii u dhaxaysay 2011-kii illaa 2017-kii, iyada oo dhoofka dhuxusha sanad kasta laga sameeyo malaayiin doolar.
Shirkan maanta furmay ayaa la rajaynayaa in laga soo saaro war murtiyeed looga hadlayo waxyaabaha xalka la biday.
← Ciidamada gaarka ah ee ilaalada Madaxtooyada Qaranka oo tababar loo soo xiray
Duqa magaalo Jarmal ku taala oo ilkaha laga daadiyay →